b l u E s k yfO res T: ပြည်ပပျော်ခေတ်
Posted by blueskyforest at 12:04 PM
ဟုတ်တယ်... ပွင့်လန်းနေတဲ့ အနုပညာပန်းတွေရော ပွင့်ခွင့်မရတဲ့ အဖူးအငုံလေးတွေပါ မိခင်ပင်စည်ကနေ လွင့်လာလိုက်တာ...။. အနုပညာတင် မကပြန်ဘူး။ လူစုံတက်စုံ နယ်ပယ်စုံ..။ ရေခြားမြေခြားမှာ ကိုယ့်စိတ်ဝင်စားမှု ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ကိုက်ညီထိုက်တန်တဲ့ အလုပ်ကို လူတိုင်း လုပ်ခွင့်ရကြပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
"ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်ဇာတိသာ ဘူမိနက်သန်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်ရှိတဲ့နေရာမှန်လို့တကယ်ပဲယုံကြည် ကြရင် ဒီထက်မကတဲ့ အားထုတ်မှုတွေ အများကြီးလုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတာကတော့ ရှင်းနေပါ တယ်ခင်ဗျား။ မဟုတ်ရင်တော့ ပြည်ပမှာသာပျော်ပေရော့ တသက်လုံး."
ဒါလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ လူဆိုတာကတော့ rational သတ္တ၀ါဖြစ်သလို ရောက်လေရာမှာ ဆီလျော်ကိုက်ညီအောင် ကြိုးစားနေကြရင်းနဲ့ အချိန်ကြာလာလို့ နေသားတကျ ပျော်စရာဖြစ်လာတဲ့အခါ ပျော်မွေ့သွားကြ သူတွေ ရှိမှာပါပဲ။ ကိုယ့်နေရာမှန်လို့ထင်(ခဲ့)တဲ့ နေရာကို ပျော်စရာဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးဖို့ အများကြီးလုပ်ဖို့ လိုနေသေးတယ် ဆိုတာ တကယ်ကို ရှင်းပါတယ်။ တဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်း ရောက်ရာအရပ်မှာ ပျော်အောင်နေရင်း ပျော်လာတဲ့အခါ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်တွေရော ... ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့။
လူတောင်တော်တော်စုံနေပြီပဲဗျ။ မြန်မာပြည်လုပ်ဖို့ နေရာရှာကြရအောင်ဗျာ။
chaw ei thein said...
်တကယ်တော့ မပျော်ရပါဘူး အစ်ကိုရာ။
ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေရတဲ့အခါ တော်ရာကိုပဲ ပျော်စ၇ာဖြစ်အောင် ကြိုးစားရတော့တာကိုးဗျ။
"ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ ရဖို့ သင့်ရာဒေသအမြဲနေ" လို့တော့ ရွတ်ဖူးတာပဲ... ငယ်ငယ်တုန်းက။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး... သတိရလို့။ "(ကို) ကလူသစ်" မန့်းသွားတာ မိုက်တယ်။ ဟီး မြန်မာပြည်လုပ်ဖို့ နေရာရှာကြရအောင်တဲ့။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေကို Common Fate လို့ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ "တစ်ဦးကောင်း၊ တစ်ယောက်ကောင်း" နေလို့ မရလောက်အောင်ကို အခြေအနေက အားလုံးနဲ့ (တစ်နိုင်ငံသားလုံးနဲ့) ဆက်စပ်နေတယ်။ ရွေးချယ်စရာက (မရှိလောက်အောင်) နဲပါးတယ်။ ဒီတော့ အပြောင်းအလဲ တစ်ခု (ဒါမှ မဟုတ်လည်း ၂ ခု ၃ ခု အခုတွေအများကြီး) လိုချင်၊ လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေအဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ထီးရိပ်အောက်ကနေ ရုန်းထွက်ကြတယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာထာပေါ့။ Common Fate ဆိုတော့ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း ခေတ်ကို ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲ ခင်ဗျားဆိုလို့ ဒီဘလော့(ဂ်)ပိုင်ရှင်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။ (ကျနော် အပါအဝင်) အားလုံးကို ရည်ညွှန်းချင်ထာပါ။
Lack of "Legacy"